Global Voices teny Malagasy » Ny dindo navelan’ireo Portiogey tamin’ny hainahandro indiàna · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 02 Jolay 2020 5:36 GMT 1	 · Mpanoratra Ayesha Saldanha Nandika (fr) i Claire Ulrich, avylavitra
Sokajy: Azia Atsimo, India, Paortiogaly, Mediam-bahoaka, Sakafo, Tantara, Zavakanto & Kolontsaina
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Febroary 2014)
Sorpotel. Sary an'i gcmenezes ao amin'ny Flickr (CC BY-NC-ND 2.0).
Tany amin'ny fiandohan'ny taonjato faha-16 ny Portiogey no nanjanaka an'i India. i Cochin no nitantana an'i India Portiogey , ary avy eo i Goa. Nandritra ireo taonjato efatra taorian'io, nanitatra ny vahohony tamina toerana samihafa tao India ry zareo Portiogey, indrindra fa nanaraka ny morontsiraka andrefan'ny firenena, sy ny avaratra-atsinanan'i Bengale ihany koa.
Nandritra io vanimpotoana io ry zareo Portiogey dia namela ny dindony tamin'ny sasantsasany amin'ny hainahandro indiàna, tamin'ny fomba roa samihafa: ny fampidirana laro sy hanitra vaovao tao India (izay ankehitriny lasa toy ny singa tsy azo ialàna amin'ny sakafo ao India ireny hanitra  ireny), ary tamin'ny nampidirany ireo sakafo portiogey narafitra sy narindra hifanaraka amin'ireo fahaizamanao sy tsiron-kanina indiàna.
Ny dindo portiogey tena matanjaka indrindra dia mazava loatra fa tao Goa, izay notazonin'i Pôrtiogaly hatramin'ny 1961. Ny lakozia “katôlika’ tao Goa  manokana dia manana fiaviana portiogey tena miavaka. Ilay bilaogera, Hilda Mascarenhas, no mitondra ny famaritana ilay hainahandro mampiavaka an'i Goa, ny kisoa vindaloo  :
Ny anarana hoe “Vindaloo” dia avy amin'ilay sakafo portiogey “Carne de Vinha d’Alhos”, hena, izay mazàna hena kisoa arahana divay sy tongolo lay. Novaina kely ilay sakafo pôrtiogey, ka ilay divay mena dia nosoloina, natao vinaingitra (vinaingitra avy amin'ny voanio) ary nampidirina ny sakay mena avy any Cachemire nasiana zavamanitra, ary dia lasa hoe Vindaloo. Mitondra anarana hafa ihany koa izy io toy ny hoe Vindalho na Vindallo. Ny Vindaloo nentindrazana, misy kisoa, dia tena tototra hanitra sy laro, ary tsy misy ovy. Tsy misy mihitsy fety na fotoana firavoravoana lazaina fa feno sy tanteraka raha tsy ao ny Kisoa Vindaloo an'i Goa. Rehefa mihinana azy dia arahana an'ilay tsakitsaky malaza sy ankafizina be, ny sanas  an'i Goa, izay karakaraina miaraka amin'ny divay vita tamin'ny voanio! Amim-pireharehana tokoa no aroso io sakafo miavaka io any an-tokantrano rehetra ao Goa, rehefa tonga ny Noely, Taombaovao ary Paska.
Gavin Harvey manampy hoe  :
Vinaingitra sy tongolo lay, nafangaro hena kisoa sy hena hafa naotrika no niteraka ny Vindaloo, saingy rehefa nampidirina tao India ilay izy, naverina noketrehina niaraka taminà hanitra isankarazany sy sakaibe (poivron). Natsofoka ho isan'ny fangaro tamin'ilay sakafo ihany koa ny ovy ary ny “alhos” dia lasa “aloo” (voanteny hindi ilazàna ny “ovy”) – ary dia vetivety foana, noheverin'ny olona fa fangaro tena ilaina amin'ny fikarakaràna io sakafo io ny ovy.
Lavidavitra kokoa any atsimon'i Goa, manaraka ny morontsiraka, manana sakafo marobe misy itoviana amin'ny hainahandro katôlika ao Goa ny tanànan'i Mangalore ary ny hainahandro katôlika ao Mangalore . Sakafo iray misy kisoa ary iraisan'ireo tanàna roa ireo ny sorpotel (na sarapatel), avy any amin'ny faritr'i Alentejo  ao Portiogaly. Ao amin'ny bilaogy Goan Recipes, Glenn manoratra hoe  :
Ara-bakiteny ny teny hoe ‘sarapatel’ dia midika fisaritahana, ary angamba manondro ny fifangaroan'ireo hena, ny fon'ny kisoa, ny atiny, ary hatramin'ny ràny!
Fromazy Bandel. Sary tao amin'ny Flickr an'i Manidipa Mandal (CC BY-NC-ND 2.0).
Any amin'ny lafy iray amin'i India, misy dindo vitsivitsy tazana nentin'ireo Portiogey amin'ny fomba fahandron'ny Bengali ihany koa. Rangan Datta no mitantara amintsika ny tantaran'ny fromazy  iray manokana :
Avy any amin'ilay sampandraharaham-barotra portiogey fahiny tao Bandel (any amin'ny 50 km eo ho eo avaratr'i Calcutta), ny fromazy Bandel angamba no iray amin'ireo hany dindon'ny fahandro portiogey ao Bengale. Efa hatrany amin'ny tapany farany tamin'ny taonjato faha-16 no nisy ny dindon'ny portiogey tao Bengale. Efa ho taonjato iray taorian'ny nahatongavan'i Vasco de Gama tao amin'ny morontsiraka andrefan'i India, sy nanombohan'ireo Portiogey niroso niditra nankany Bengale […] Azo heverina ho ry zareo Portiogey no nitondra ny fahaizamanao fromazy tao Bengale, ary na teo aza ireo sakantsakana rehetra, naharitra nandritra ny taonjato maro ilay teknika. Angamba ireo Mogh mpahandro avy any Birmania no nanamboatra ny fromazy Bendel nampidirin'ireo Portiogey, teo ambany fanarahamason-dry zareo. […] Ity kazarana fromazy tsy niotrika ity dia vita avy amin'ny rononon'omby ary misy endriny roa : “natiora” na “fumé”. Alaina aloha ny rononon'omby natambaingana tamin'ny fampiasàna voasary makirana. Avy eo ny fromazy atsofoka anaty lasitra ary tsihifina anaty tavy voalavadavaka. Miloko fotsy toy ny ronono ilay fromazy natiora, ary toy ny endrika kodiarana kely manana savaivo 3 sm sy hatevenana 1 sm no anolorana azy. Ilay karazany “fumé” indray kosa dia manana ireo endrika sy habe ireo koa, saingy mifono hoditra manopy manja manodidina ilay afovoany fotsy sy malefaka.
Zoe Perrett manamarika hoe  :
Tsy madiorano ny dindo navelan'ireo Portiogey tao Bengale. Rehefa nandalo tao Goa aloha, betsaka tamin'ireny fampidirana vaovao ireny no tonga niaraka taminà endrika indiàna mivandravandra, na , raha ny marina, sakafo nangalarin-dry zareo Portiogey tao amin'io fanjakana kely io. Nentin'ireo Portiogey ho ao Bengale ihany koa izay zavatra nobaboiny tany an-tany hafa tany ; ny hatsaràn'ny voankazo toy ny mananasy, ny papay, ny goavy ny letisy avy any Atsinanana. Raha toa i Goa ka nandray ireo dindo isankarazany, nanafangaro ireo teknika sy sakafo portiogey tamin'ireo tsiro tao an-toerana, ny tao Bengale indray, betsaka ireo fangaro nentin'ny Portiogey no nahatahiry ny zavatra namantarana azy manokana. Vetivety ireo Mogh mpahandro dia nahafehy ireo fomba fahandron'ny tandrefana ny mofo sy mofomamy ; amin'izao fotoana izao, hita aranty eny amin'ireo “soufflé” sy toerana fivarotana mofomamy ao Calcutta, ary angamba koa amin'ny fampiasàna ny lafarinina fotsy hanaovana ny ‘luchis’ (dipaina bengali).
Kulkuls. Sary ao amin'ny Flickr an'i Amanda Fernandes (CC BY 2.0).
Lova napetraky ny Portiogey ho an'i India ihany koa ireo sakafo ampiasàna siramamy. Ny Kukkuls, na kidyo, dia mofomamy hanin'ireo katôlika ao Goa sy Mangalore rehefa andro Noely. Aparna Balasubramaniam no manome ny famaritana azy ireny :
Ny Kulkuls dia azo avy amin'ny fanendasana feta mamy lavalava, novolavolaina tànana sy nomena endrika boribory kely (toy ny “coquilles de beurre”), izay matetika fafazana vovon-tsiramamy malefaka (sucre glace), dia avela ho maina. Mitovy endrika aminà kankana kely ny “kulkuls”, izay no nahatonga ny anarany ho “Kidyo” amin'ny fiteny Konkani, fampiasa ao Goa. Raha tsy “kankana” no fahitanao azy, dia azonao eritreretina ny endrika akora (akoran'atody, ohatra). Tiako ny eritreritra hoe ny anarana Kulkul/Kalkal dia avy amin'ny feo avoakan'ireny mofomamy kely ireny rehefa mifampikasokasoka ao anatin'ny sirop vita tamin'ny siramamy ry zareo, na angamba ao anaty boaty fitahirizana azy. Rehefa Noely no karakaraina ao Goa ny Kulkuls ary singa iray manan-danjan'ny Kuswar  (tsindrin-tsakafo sy tsiro nentindrazana rehefa Noely ao Goa) ifampizaràna amin'ny mpifanolo-bodirindrina. Entina ihany koa izy ireny mandritra ireo fitsidihana, ‘adidy tsy maintsy atao’ amin'ireo namana na fianakaviana. […] Nisy olona nanipika hoe ny Kulkuls, raha ny marina, dia fanovàna kely natao avy amin'ireo Filhoses Enroladas  portiogey, tsindrin-tsakafo rehefa Noely, miendrika horonana na paty naolana, nendasina ary nofafazana ‘sucre glace’. Araka izany dia mety hoe ireo Portiogey no nitondra ny Kulkuls niditra tao India.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/07/02/148783/
 India Portiogey: http://fr.wikipedia.org/wiki/Inde_portugaise
 Ny lakozia “katôlika’ tao Goa: http://en.wikipedia.org/wiki/Goan_Catholic_cuisine
 ny kisoa vindaloo: http://www.hildastouchofspice.com/2012/04/goan-pork-vindaloo.html
 divay vita tamin'ny voanio! : http://fr.wikipedia.org/wiki/Vin_de_palme
 manampy hoe: http://anglo-indianfood.blogspot.in/2012/06/anglo-indian-cuisine-journey-through_07.html
 hainahandro katôlika ao Mangalore: http://en.wikipedia.org/wiki/Mangalorean_Catholic_cuisine
 manoratra hoe: http://www.goan-recipes.com/goan-pork-sorpotel-recipe/
 no manome ny famaritana azy ireny : http://www.mydiversekitchen.com/2011/12/week-of-indian-christmas-day-2-kulkuls.html
 Filhoses Enroladas: http://www.flickr.com/photos/muntchka/3125832622/